नाइज अभिलेखागार - TipWho
नाई टिप क्यालकुलेटर परिचय नाई द्वारा कपाल काट्नु भयो? पहिले, तपाईलाई पहिल्यै नै थाहा छ कि तपाईले आफ्नो हजामलाई सल्लाह दिनुपर्दछ, तर यदि तपाईले जानु भएन भने, हाम्रो टिपिंग नाइयोंको मार्गनिर्देशन जाँच गर्नुहोस्, जुन बार्बर टिपिंग शिष्टाचार माथि जान्छ। अब यो बाटो बाहिर छ, तपाईं कसरी हिसाब गर्नुहुन्छ कति नाई टिप गर्ने? […]
नाउप परिचयको लागि कति टिप दिने तपाईंको समय मनपर्ने छिमेकी बार्बरमा कपाल काट्ने वा दाह्री ट्रिम गर्ने समय हो? यस लेखमा हामी हजाम सल्लाहको शिष्टाचार मार्फत जान्छौं ताकि तपाईं आफ्नो नाईलाई निर्धक्क भई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। अमेरिकी सरकारको श्रम तथ्या of्क विभागका अनुसार त्यहाँ २०,१20,130० वटा छन् […]